शक्तिशाली भूकम्पपछि पराकम्पले त्रासदी,मानिसहरु सडकमा ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > शक्तिशाली भूकम्पपछि पराकम्पले त्रासदी,मानिसहरु सडकमा !
शक्तिशाली भूकम्पपछि पराकम्पले त्रासदी,मानिसहरु सडकमा !
दक्षिणी फिलिपिन्स सहरका हजारौं वासिन्दाहरु शुक्रबार गएको शक्तिशालीको भूकम्पको तीनदिनपछि पनि सडकमा छन् । शुक्रबार गएको ६.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि पनि जारी रहेको पराकम्पको कारण सर्वसाधारण माझ त्रासको वातावरण पैदा भएको छ ।
मिन्दानाओ द्विपनजिकै सुरिगाओ र नजिकैको क्षेत्रहरुमा प्रभावित हुने गरी गत शुक्रबार ६.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा छ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने दुई सयभन्दा बढी घाइते भएका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी यस भूकम्पको कारण हजारौँ घरहरु ध्वस्त भएका छन् ।
राज्यको भूकम्प विज्ञान कार्यालयका अनुसार शुक्रबार आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि फिलिपिन्समा सयभन्दा बढी पराकम्प गइसकेको छ । यद्यपी अधिकारीहरुका अनुसार यस शक्तिशाली भूकम्पछि थप हताहतको भन्ने कुनै समाचार प्राप्त भएको छैन् ।
फिलिसिन्समा सन् २०१३ गएको ७.१ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी २२० भन्दाबढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
२०७३ फागुुण २ गते १३:४१ मा प्रकाशित
खुल्यो हाइड्रोको सेयर कारोबार !
अकबरे खाँदै लाखौं कमाउँदै !
सोमवार सुनको भाउ स्थिर, प्रतितोला ७१ हजार नै कायम
सिटिजन्स बैंकको ‘सिटिजन्स कोसेली निक्षेप योजना’ : यस्ता छन् सुविधाहरु